'जनताले राजतन्त्रको अवशेषलाई रोज्दैनन्'
समकालिन नेपाली राजनीतिमा कृष्णप्रसाद सिटौला चिरपरिचित नाम हो । पञ्चायती निरङ्कुशता बिरुद्धको आन्दोलनदेखि १० वर्षे सशस्त्र बिद्रोहमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन १२ बुँदे सहमति, लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन, बिस्तृत शाान्ति सम्झौता, गणतन्त्र घोषणा, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायण्हिटी दरबारबाट हट्न सरकारको आदेश सुनाउन जाने र समावेशी संविधान जारी गर्ने कार्यमा संविधान मस्यौदा समितिको सभापति भएर सिटौलाले नेपाली राजनीतिको कोर्ष परिर्वतनमा पुर्याएको योगदान उनलाई सम्झिने महन्वपूर्ण बिषय हुन् ।
झपाको क्षेत्र नं. ३ बाट २०४८ सालदेखि नै चुनाव लड्दै आएका नेता सिटौलाले आधादर्जन पटक चुनावमा उम्मेद्वार बन्दा तीनपटक जीत र त्यति नै पटक यस क्षेत्रबाट हार पनि ब्यहोरेका छन् । ०४८, ०५१ र ००६४ मा उपबिजेता बनेका सिटौलाले सर्वप्रथम् ०५३ को उपनिर्वाचनमा बिजयहासिल गरेर मेची अञ्चलमा एमालेको लालकिल्ला तोड्न सफल भएका थिए । त्यसयता ०५६ र ०७० को चुनावमा पनि सिटौलाले यस क्षेत्रबाट चुनाव जितेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियाका एक महत्वपूर्ण हस्ती सिटौलालाई यतिबेला झापामा जनआन्दोलनका सहयात्री माओवादी र एमालेले घेराबन्दीमा पारेका छन्, राजावादी उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङदेनलाई समर्थन गरेर । यो क्षेत्रमा माओवादी र एमालेले उम्मेद्वारी दिएका छैनन् । नेपाली काँग्रेस पाटीले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक सूचीको १ नम्बरमा सिटौलाको नाम समावेश गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो । सहजरुपमा सांसद् बन्ने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सिटौलाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमै प्रतिष्पर्धा गर्ने जोखिम किन मोले ? यी लगायत चुनावी सन्दर्भमा झपाबाट पत्रकार कृष्ण हुमागाँइले पार्टीभित्र तेस्रो बैचारिक धारको नेतृत्व गर्ने नेता सिटौलाँंग गरेको कुराकानी -
तपाईंलाई पार्टीले समानुपातिकको १ नम्बरमा राखेको थियो, सहजै रुपमा सांसद् हुने सुनिश्चित हुँदाहुँदै किन जोखिम बाटो रोज्नुभयो ?
जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्छु भन्ने मान्छेले जनताका बीचमा जान जोखिम मान्नु हुँदैन । लोकतन्त्रमा जनता सर्वशक्तिमान हुन्छन् । जहाँसम्म सहजै सांसद् हुने बाटोको कुरा गर्नुभयो, मेरा लागि सांसद् हुनुमात्र ठूलो कुरा थिएन । सांसद हुनुमात्र ठूलोकुरा मान्ने हो भने त्यो बाटो निश्चितै रुपमा सहज थियो होला, तर मैले झापा ३ बाट चुनाव नलड्दा कस्लाई जिताउनु पर्नेथियो त ? मुख्य प्रश्न यो हो ।
भनेपछि राप्रपासँंगको गठबन्धनको पक्षमा तपाई हुनुहुन्नथ्यो ?
पहिलो कुरा त यो गठबन्धन हुँदा म नेपालमा थिइँन । यसमा मेरो सहमति हुने कुरै भएन । म बिदेशमा धार्मिक यात्रामा भएको समयमा मसँग सम्पर्कै नगरी पार्टीका साथीहरुले झापा ३ नम्बर क्षेत्र राप्रपालाई दिने कुरा गर्नु भएको रहेछ, यसलाई सच्याउन मैले नेतृत्वलाई दवाव नै दिनुपर्यो । भनौं भने पार्टीभित्र एक प्रकारको संघर्ष नै गर्नुपर्यो मैले । दोस्रो, मैले यो क्षेत्रमा आएर यहाँका पार्टी कार्यकर्ता, शुभेच्छुक ,यहाँका मतदाता, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मेरा सहयात्री दलका साथीभाईसँग पनि भेटघाट गर्दा तपाईले किन राप्रपालाई आफ्नो क्षेत्र छोडेको भनेर धेरै प्रश्न गर्नुभयो । यहाँका आम मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको इच्छा र आग्रहलाई मैले नकार्न संिकन ।
अनि मलाई २०४६ सालको जनआन्दोलनका शहीद राम थापा, २०६२ ०६३ का शहीद राजन गिरी र सुरज विश्वास जुन भूमिमा ढले त्यही भूमिमा राजावादी, पञ्चायतकालको दमनकारीलाई जिताउन उसको झोला बोकेर हिंड्न मेरो स्वभिमानले दिएन र मैले पार्टीभित्र एक प्रकारको बिद्रोह नै गर्नु परेको त सवैलाई थाहा छ नि । फेरि हाम्रो पर्टीका कार्यकर्ताले राप्रपाको झोला बोकेर हिड्ने कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरे झापामा, थोरै मत भएको पार्टीको उम्मेद्वारलाई धेरैे मत भएको पार्टीको सबै मत झार्न पनि सकिदैंनथ्यो । तालमेलै हुँदापनि जहाँ जस्को जनाधार बढी छ, त्यहाँ त्यो दललाई सिट छाड्ने कुरासम्म ब्यवहारिक हुनसक्छ, त्यो पनि नीति, बिचार र कार्यक्रम मिलनेहरुका बीचमा ।
तपाई बिद्रोह गर्ने अनि पार्टी सभापति चैं राप्रपासँग गठबन्धन गर्ने यो अलि मिलेन नि ?
हो, मिलेको छैन, हामी गणतन्त्रमा गइसक्यौं । राप्रपाले पार्टीको बिधानमा अहिले पनि राजतन्त्र कायम राखेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सैद्धान्तिकरुपमा गठबन्धन हुन सक्छ र ? सत्ता स्वार्थका लागि मात्र हुने र भएका यस्ता गठबन्धनको पक्षमा म छैन । हाम्रो पार्टी र एमाले, माअ‍ेवादी कसैले पनि समाप्त भइसकेको राजतन्त्रको अवषेश बोक्नेसँग गठजोड गर्नु हुदैनथ्यो भन्ने मेरो स्पष्ट अडान अहिले पनि कायम छ । दुवै तर्फबाट गल्ति भएको छ । नेताले गरेको गल्तिलाई जनता र कार्यकर्ताले गोप्य मतदानबाट सच्याउनुपर्छ, सच्याउनेछन् भन्नेमा म पूर्ण बिश्वस्त छु ।
तपाईंलाई पार्टीले समानुपातिकको सूचीमा राखेको केहीदिन मौन बस्नु भएको, अनि केपी ओली र प्रचण्डसँगको भेटपछि प्रत्यक्षमा उम्मेद्वारी दिनुभएको हो भन्ने चर्चा छ नि ?
मैले अघि नै भनें कि यो कुरा हुँदा म देशमा थिइन, अनि मलाई मौन बस्यो भन्न मिल्दैन । मैले मेरो पार्टीका नेता साथीहरुसँग यस बिषयमा आफ्नो असहमति स्पष्ट ढङ्गमा राखेपछि पार्टीले त्रुटी सच्यायो अनि म उम्मेद्वार बनेको हो ।
तपाईंका सभापति शेर बहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच चर्को आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ, तर तपाई र केपी ओलीबीच झापामै एकैदिन अलग अलग स्थानमा सभा हुँदापनि किन कुनै टिकाटिप्पणी हुँदैन किन ?
होइन, जनआन्दोलनका सहयात्री दलका नेतहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु नराम्रो हो र ? म जनआन्दोनकारी, सहयात्री शक्तिहरुकाबीचमा अझै एकता, मेलमिलाप र सहकार्य हनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणसम्म मेरो आवश्यकता र भूमिकालाई बुझेर नै सबै दलका नेताहरुले मलाई बिगतमा संविधान मस्यौदा समितिको सभापति बनाएका होलान् नि त । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा मेरो अझै महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ, शान्ति प्रक्रियामा हतियार ब्यवस्थापन र माओवादी लडाकुको समायोजन भएपनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका काम बाँकी नै छन् । त्यसैले मैले चुनाव जित्नुपर्छ, अहिले पनि यो संविधान मासेर राजा ल्याउने चलखेल र षड्यन्त्रहरु अँध्यारो कुनाहरुमा भईरहेका छन् । यो कुरालाई बुझेर सबैले मेरो आवश्यकतालाई महसुस गरेका हुनसक्छन् । तर मैले विपक्षी दलका नेताहरुलाई भेटेपछि मात्र चुनावमा उठ्ने निर्णय गरेको भन्ने कुरा सही होइन ।
ओली र प्रचण्डसँग तपाईको भित्री साँठगाठको चर्चा छनि त ?
चर्चा र हल्लाका कुरा नगर्नुस्, हिजो सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक भएर माओवादीलाई हेलीकप्टरमा चढाएर शान्ति प्रक्रियामा ल्याइरहँदा मलाई मेरै पार्टीका साथीहरु र अरुले पनि यो सिटौला र प्रचण्ड सढुदाइ सढुभाइ हुन्, पारिवारिक नताका मन्छे हुन् पनि भने, लेखे, मलाई माओवादीको सवारी मन्त्री भनेर आलोचना पनि नगरेका होइनन् । मलाई देशमा शान्ति ल्याउनुथ्यो, म गिरिजाबाबूको शान्तिप्रतिको दृढ अठोटमा अटल र अबिचलित थिएँ । त्यस्ता कुराले केही फरक पर्दैन । मलाई यहाँका जनताकाप्रति पुरापुर बिश्वास र भरोसा छ । म जनताको स्वविवेक र स्वाभिमानमा विश्वास राख्दछु कि क्षेत्र नं. ३ का जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको योद्धा मलाई मतदान गरेर जिताउछन् कि चिहानबाट उधिनेर राजतन्त्र ब्युँताउछु भन्नेहरुलाई हेर्न बाँकी छ । यो यहाँका जनताको पनि परीक्षाको घडी हो ।
बाम गठबन्धनको पल्ला भारी छ भन्ने प्रचार छ कसरी चुनाव जित्नुहुन्छ ?
मेरो क्षेत्रमा बामपन्थीको उम्मेद्वार नै कोही छैन । एमाले र माओवादी केन्द्रको सूर्य र हँसिया हथौडा चिन्हसँग मेरो कुनै प्रतिष्पर्धा नै छैन । मेरो प्रतिष्पर्धा गणतन्त्रका बिरोधी, निरङकुश राजतन्त्रका शाही मतियार, पञ्चायतकालका दमनकारीसँग हुन गईरहेको छ । शहीद राम थापा, राजन गिरी र सुरज बिश्वासको रगत बगेको यो भूमिका सचेत जनताले जनबिरोधीलाई होइन, म जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको, जनआन्दोलनको सहयात्री गणतन्त्रवादीलाई जिताउने छन् । आफ्नो उम्मेद्वार नभएपछि यहाँका लोकतन्त्रवादी, बामपन्थी र स्वाभिमानी जनताले मलाई नै मतदान गरेर जिताउनेछन् । हेर्नुहोस् मेरो जीत सुनिश्चित छ । पहिले पाँचहजार भोट बढी मत ल्याएर जितेको थिएँ, अहिले आठहजार बढी मत ल्याएर चुनाव जित्छु । यहाँका जनता परिवर्तन बिरोधीको पक्षमा छैनन्, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा जनताको अभिमत रहेको मैले पाएको छु ।
यहाँका जनताको इच्छा र चाहना के पाउनु भएको छ ?
जब म गृहमन्त्री र सरकार माओवादी वार्ता टोलीको संयोक थिएँ, त्यो वेला गाउँमा जाँदा जसरी पनि माओवादीसँगको वार्ता सफल गर्नुस्, हामीलाई बाँच्न पाए हुन्छ । अरु दुःख सुख आफैं गरिखान्छौ भन्ने जनताको इच्छा र चाहना पाएको थिएँ । यहाँ मात्र होइन, देशभरी नै बिहान घरबाट हिंडेको परिवारको सदस्य बेलुका घरमा सकुशल आउने हो कि होइन ? भन्ने त्रास थियो, त्यो त्रासबाट जनतालाई, देशलाई मुक्ति दिनु हाम्रो कत्र्तब्य र दायित्व थियो त्यो हामीहरुले पुरा पनि गरेका छौं ।
तपाईले बिगतमा जनप्रतिनिधि हुँदा यस क्षेत्रको बिकासमा ध्यान दिनसक्नु भएन भन्ने बिपक्षीको आरोप छ नि ?
झापा ३ मा बिकास भएन भनेर जजस्ले आरोप लगाउँदैछन् त्यो सत्यमा आधारित छैन । मैले यस क्षेत्रमा चार अर्ब भन्दा बढीका बिकास योजना ल्याएको छु । राप्रपाका यस क्षेत्रका उम्मेद्वारले मैले नै बनाएको पुल र बाटोमा गाडी कुदाएर अलि पर्तिरको चिया दोकानमा बसेर भनिरहेका छन् कि सिटौलाले के बिकास गर्यो भनेर । राजा ज्ञानेन्द्रले चारबर्ष शासन गर्दा अहिलेका राप्रपाका उम्मेद्वारले चाही के बिकास गरे ? एक करोड लगानी भएको कुनै ठोस काम भएको कुनै योजना छ उनीहरुले गरेका ? भन्न सक्छन् ?
तपाईले चाही यस क्षेत्रको बिकासमा के के गर्नुभयो त ?
मैले चार अर्ब बराबरका बिकास योजना यो क्षेत्रमा पारेको छु । मेची लोकमार्गको चारआली केचना सडक, देउनीयाँ खोलामा पुल, हुलाकी मार्ग, मेची पुल निर्माण भइरहेको छ । गिरिजाप्रसाद स्मृति भवन चन्द्रगढीमा बनिरहेको छ । यसको शिलान्यासमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, हाम्रो पार्टी सभापति सुशील कोराला, बिजय गच्छदार म समेत भएर संयुक्त रुपमा गरेका हौं नि । किराँत भवन, गुरुकुल भवन, भद्रपुर एयरपोर्टलाई नाइट ल्याण्डीङ बनाउने योजना अघि बढाएका छौं । मेची अञ्चल अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा अघि बढाउने कार्यलाई तीब्रता दिइरहेका छौं ।
यस क्षेत्रका साविकका धेरै गासिहरुमा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाएका छौं, स्कुलहरुमा सुविधा सम्पन्न पक्की भवन बनाइएको छ । देउनियाँ – हँडिया नदीका थुप्रै ठाँउमा पक्की पुल बाइएको छ । भित्रीबाटोहरु ग्राभेल गरिएकाछन् । भद्रपुर, राजगढ, सडक निर्माण गरिएको छ । घेराबारी, दल्की, सैनिक सडक, घेराबारी, राजगढ, लक्ष्मीपुर सडक बनेको छ । केचना रिङरोड सडक,बन्दैछ । ३ बर्षभित्रमा थुप्रै भित्री बाटाहरु पीच भइसक्नेछन् । बिद्युत बिस्तार, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा थुप्रै काम भएका छन् ।
२०७४ मङ्सिर १७ आइतबार ०८:५०:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको आजै सात महीना
\_"अर्थ सचिब राजन खनालको चरीत्र देखेर छक्क परें\_" सोमलाल सुबेदी,पूर्व मुख्य सचिब
म देशको प्रतिनिधित्व गरी एसियाली विकास बैंकमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै थिएँ । छापामार शैलीमा मलाई फिर्ता बोलाइयो ।
जोशीको नाम अनुमोदन गर्नुहुँदैन, निरु पाल,संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सदस्य
संसदीय सुनुवाई विशेष समिति अनिर्णयको बन्दी भयो । किन ? खै, अनिर्णयको बन्दी किन बनाउन खोजेका छन्, मलाई पनि थाहा छैन । पटकपटक बैठक बस्ने, निर्णय गर्न
उनले शक्तिकेन्द्रमा ठोकिन आउने ठूला साना किसिमका आफ्ना लागि भक्ति गाउन झुम्मिने झुण्डहरुका एक होईन अनेक दृश्यहरु देखेका छन् । कहिले अप्रत्यक्ष